Indaba Yethu - Chengdu Xinzi Rain Clothing CO., Ltd.
Ukwethulwa kweXinzi Rain and Group
Ku-Xinzi Rain, bonke abaklami bethu bahlola izikhathi eziningi ukuze bathuthukise ubukhona obuhle njengokungathi bahumusha umlingo, bahumushe kahle zonke izimpawu zesithombe, futhi bafaka amandla omoya ephepheni, futhi bazame ukuzenza zibe ngokoqobo.
Ku-Xinzi Rain, wonke ubhodisi wethu oklanywe kahle uwumsebenzi wobuciko kunobhodisi.
Ucezu ngalunye lwento yangokwezifiso ye-Xinzi Rain ludinga izinqubo eziningi ezihlukene ezenziwe ngezandla kusukela ekuklanyweni okusalungiswa kuye ekuthungeni, kusetshenziswa izinto ezihlukile nemishini yobungcweti ukuqeda lokho.
Abanye bobhodisi abasezingeni eliphezulu noma abayinkimbinkimbi baze babize isikhathi esiningi ukuthunga.Noma ngabe ukwenza amapuleti noma ukuthunga, ubuciko buhle kakhulu.
Imvula yaseXinzi ichaza ubuhle obungobakho, iqonda imicabango nezimfuneko zawo wonke umuntu wesifazane othanda ubuhle
Zonke izinyathelo zokuthunga zidinga amasu anembe kakhulu.Ngemuva kwayo yonke isiqephu sezingubo zangaphansi ze-Xinzi Rain ezinencazelo ephezulu kunomsebenzi wawo wonke amangcweti.
Inaliti kanye nentambo kuwumsebenzi wokuphila konke.Izingcweti ziyaqhubeka nokuthola ifa lamakhono aphezulu okuthunga izingubo zangaphansi, zilandela isitayela esingaguquki somkhiqizo, futhi zithunga izingcezu zezingubo zangaphansi ezinencazelo ephezulu njengobucwebe.
Ibamba ingqikithi yobuciko bayo futhi ngiyiveze, futhi iletha amandla kuwo wonke umuntu wesifazane ogqoke izingubo zangaphansi ze-Xinzi Rain, impumelelo eqhubekayo futhi ishintsha amandla ami, ngalawa mandla okuqhubekela phambili kwezothando.
Umthamo wethu Wokukhiqiza:I-Xinzi Rain Co., Ltd. igxile kobhodisi besifazane iminyaka, kanye nokudayiswa
ithimba kanye nethimba lokukhiqiza basendaweni efanayo, ukuze uhlelo lokukhiqiza, inqubo,
futhi umphumela ungafika ngesikhathi, usebenzisa izithombe, Rekhoda ividiyo noma ingxoxo yevidiyo eku-inthanethi bese uyithumela kumakhasimende,
ukuze amakhasimende akwazi ukuqonda ukuqhubeka kwama-oda awo kusenesikhathi.
Ikhono lethu Lokuklama:Singabakhiqizi ochwepheshe abangaphansi kwabesifazane.Sineqembu eliqinile lokuklama kanye nobuchwepheshe bokuthuthukisa isampula.Singahlinzeka ngezinsizakalo ze-ODM neze-ODM.Singakunikeza izingubo zokufaneleka ezenziwe ngokwezifiso ngokwezidingo zakho.Futhi sizoncoma imikhiqizo emisha kumakhasimende ethu njalo ngenyanga noma umjikelezo.